बह पोख्ने ठाँउमा बन्देज नलाउनु नै राम्रो-सरोजराज अधिकारी - MeroReport
बह पोख्ने ठाँउमा बन्देज नलाउनु नै राम्रो-सरोजराज अधिकारी
कान्तिपुर दैनिकमा राजनितिक ब्युरो प्रमुखका रुपमा कार्यरत पत्रकार सरोजराज अधिकारी
पत्रकारिताका अलावा लेखक पनि हुन् । उनका चक्रब्युहमा चन्द्रसुर्य, जासूसीको जालो र रुप बजारकी नोरा जस्ता किताबहरु प्रकाशित छन् । अखबारिय लेखन एवं किताब लेखनका अलावा सरोज सामाजिक संजालहरुमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । खासगरी ब्लग र माईक्रोब्लग ट्विटर मार्फत राजनिति, खेलकुद र अन्य सामाजिक सवालहरुमा उनी शब्दको कैँची चलाउन माहिर छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै सरोजराज अधिकारीसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानी :
आफूलाई सोसल मिडियामा कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छॽ
म सरोजराज अधिकारी । पेशाले पत्रकार । हाल कान्तिपुर दैनिकमा राजनीतिक ब्युरो प्रमुखका रुपमा कार्यरत छु । मैले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा पनि यही परिचय छ ।
यस्तै २/३ वर्ष भयो होला । कुनै भीषण योजना थिएन र छैन ।
कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छनॽ
राजनीतिक, सुरक्षा मामिलामा रुची बढी छ । सामाजिक प्राणी भएकाले यो विषय छुट्ने कुरा भएन । साहित्यसंग पनि बैमनस्यता छैन ।
कहिले भावना त कहिले भडाँस पोख्न । समाज, देश परिवर्तन गर्ने हुती मेरा विचारले राख्छन् झै लाग्दैन ।
तपाईले http://sarojrajktm.blogspot.com/ बाहेक अरु ब्लग पनि चलाउनुहुन्छ कि?
यही त थेग्न सकिएको छैन !
तपाईको ब्लगको नाम सरोज जर्नल रहेछ, यहि नाम किन राख्नुभयोॽ बताईदिनुस न ।
हेर्र्नुस यो नाम राख्नुको पछाडि पनि कुनै महान उद्देश्य छैन । साथीले ब्लग बनाउन, चलाउन सिकाउँदा राखिदिएको हो । फेरेर केही उत्पात होला भन्ने पनि ठानिन ।
तपाई सोसल मिडिया खासगरी ट्विटरमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छॽ
ट्विटरमा पनि भावना र भडास पोख्नै आएको हो । पेसाको चस्कोले राजनीतिक–सामाजिक विषययमा पनि लेखिटोपल्छु, सूचना बाँड्छु, समाचारका लिंक सेयर गर्छु । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग राम्रैसंग भएझै लाग्छ । उग्र विद्धान र भलादमीलाई झेल्न कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्छ ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नुहुन्छॽ
मेसो मिलेसम्म पढ्छु । सबैका वास्तविक नाम त थाहा छैन, बरुण कम्पनी, एकतारे, बाबाजी, जनकराजा, सिकारु केटोलगायतका ब्लग पढ्छु । सन्जीवजीको त झन् छुटाइन्न । किनकि, जस्तै झुर ट्विटमा पनि एक फेब दिन उहाँ कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङ्प्रति आर्कषित भईरहेका छन । नेपालमा ब्लगको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोगॽ
यो विषयको ज्ञाता परिन । तर मलाई आफ्ना वा कसैका ब्लगले नाफाघाटा भाछैन ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तरता दिन सक्दैनन् । तपाईको विचारमा ब्लगलाइ समय दिन गाह्रो भएरै हो या अरु कुनै कारणले होलाॽ
सुरुमा सबै कुरामा रुची बढ्नु स्वभाविक हो । रस पस्ने सक्रिय नै छन् । समय पनि एउटा कारण त हो नै ।
हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयोॽ
खासमा दुई तीनटा किताब लेखेपछि ठूलै मान्छे भइयो झै लागेर पनि यता झुत्ती खेल्न आको हुँ । किताबका प्रचारप्रसार निशुल्क गर्न पाइने भो । फेसबुकलाई त फ्यान पेजमै बदलेँ । चलाउन नजानेर हो कि पेज बनाएपछि अरुका पोष्ट हेर्न पाछैन । आफ्नै कुरा जोत्यो, आएका कमेन्ट पढ्यो मै सीमित छ । फरक त निकै छ नि, ब्लग र फेसबुकमा जति लेखेनी भो, ट्विटरमा १४० मै अटाउन पर्छ ।
कतिपयले लेखेकै होलान् । आफ्नै हित त राम्ररी गर्न नसकेकाले ममा भने समाजकै हित गर्ने आँट आइसकेको छैन ।
तपाई जस्ता मुलधारका संचारकर्मीहरु तथा किताब लेखनमा समेत जुटेका लेखकहरुका लागि सोसल मिडियाले गर्दा भएका फाईदा र वेफाईदाहरुलाई केलाउनुपर्दा?
उत्पातै फाईदा घाटा त केही भएको छैन । आफ्ना समाचार जबरजस्ती पढाउन लिंक सेयर गर्न पाइयाछ । उधुमै राम्रो लेखेको छु भन्दै किताबका प्रचार गर्न पाइयाछ । दुई, चार सय किताब बढी बिकाउन यताको हल्ला खल्लाले पनि काम गर्‍यो होला, रोयल्टी अलिक थपियो । त्यै हो फाईदा ।
मुलधारको पत्रकारितमा त आचारसंहिता छँदैछ, स्वतन्त्र ब्लगरका लागी पनि आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिताॽ
मानिसहरु बह पोख्न मन्दिर जादा जुत्ता खोलेरै पस्छन् । आचार भनेको मानिसको विचारसंग जोडिने कुरा हो । बह पोख्ने ठाउमा बन्देज नलाउनु नै राम्रो । बस् ! बह पोख्नेले अरुको आत्मसम्मानको हेक्का राखिदिए पुग्यो ।
‘अर्काको आँसु बेचेर ह्वीस्की पिउने ?’ लगायतका केही ब्लग रुचाइए । सुभेच्छुकले पत्रिकामै लेख्या भए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया जनाउनुभो । बाडुली लाग्ने नै खालका रोचक परिघटना न घट्नै बाँकी छ ।
कसैले त्यस्तो भन्छ भने मलाई आपत्ति छैन ।
अन्त्यमा मेरोरिपोर्ट मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ?
हेर्नुस् १६ वटा प्रश्नको उत्तर दिदै गलियो, थप भन्न केही बाँकी रहेन । साताको ब्लगर भन्ने भारी भरकम उपाधी दिन लाग्नुभो, तपाईहरुको जय होस ।
Comment by Prakash Lamichhane on July 22, 2015 at 2:32pm
बधाई छ धेरै धेरै मित्रलाई । :))